1 Tesalonisiana 5 - Ny Baiboly
Epistola Voalohan'i Md. Paoly Ho An'ny Tesalonisiana
1 Tesalonisiana toko 5
Tsy fantatra ny andro - Ny fiomanana tsy maintsy atao - Famaranan-teny sy fanaovam-beloma.
1Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana, ry rahalahy, dia tsy ilaina akory ny hanoratanay izany aminareo, 2satria efa mahalala marina rahateo hianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. 3Amin'ilay hanaovan'ny olona hoe: Fiadanana sy fandriam-pahalemana re izany! iny indrindra no hilatsahan'ny fandringanana tampoka amin'izy ireo, tahaka ny fihetsehan-jaza amin'ny bevohoka, ka tsy afa-mandositra izy.
4Hianareo anefa, ry rahalahy, dia tsy mba ao amin'ny maizina, ka tsy mba hanampoka anareo toy ny mpangalatra izany andro izany; 5fa zanaky ny mazava avokoa hianareo, ary zanaky ny andro koa; tsy misy an'ny alina isika, na an'ny maizina akory. 6Koa aza mba matory tahaka ny sasany isika, fa aoka hiari-tory sy hifady hanina. 7Fa ny alina no fatorian'izay matory, ary ny alina no fimamoan'izay mimamo. 8Koa aoka isika an'ny andro kosa hifady ary hitafy ny finoana amam-pitiavana ho fiarovan-tratra, sy ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. 9Satria tsy ny ho an'ny fahatezerana no nanendren'Andriamanitra antsika, fa ny hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy Tompontsika, 10izay maty ho antsika mba hahatonga antsika hiara-belona aminy, na mahatsiaro na matory isika. 11Noho izany àry, mifanalà alahelo hianareo, ary mifamporisiha handroso, araka ny efa ataonareo rahateo.
12Mangataka anareo koa izahay, ry rahalahy, mba hanaja izay miasa ao aminareo, sy mifehy anareo ao amin'ny Tompo, ary izay mananatra anareo. 13Noho ny asan'izy ireo, manàna fitiavana azy lehibe koa, ary mihavàna tsara aminy hianareo. 14Mangataka aminareo koa izahay, ry rahalahy: anaro izay tsy mipetraka tsara, alao alahelo ny osa, ankaherezo ny malemy, mandefera amin'ny olon-drehetra. 15Tandremo fandrao misy mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, fa ny soa ho an'ny namana sy ny olon-drehetra no katsaho mandrakariva. 16Mifalia mandrakariva; 17mivavaha lalandava; 18ary misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy Jesoa ho anareo rehetra. 19Aza mamono ny Fanahy; 20aza manamavo ny faminaniana, 21fa zahao toetra ny zavatra rehetra, ka tano izay tsara; 22fa fadio kosa na dia izay mitarehin-javatra ratsy fotsiny aza.
23Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hanamasina ny tenanareo manontolo, ka hotahiriziny tsy hanan-tsiny ho amin'ny fahatongavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny vatanareo. 24Tsy mivadika ilay niantso anareo, ka izy ihany koa no hanefa izany.
25Mivavaha ho anay, ry rahalahy! 26Mampanao veloma ny rahalahy rehetra amin'ny fanorohana masina izahay. 27Mihanta aminareo amin'ny anaran'ny Tompo aho, mba vakio amin'ny rahalahy rehetra ity taratasy ity.
28Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika. Amena. >